နေအိမ် » စကားတာ » Angry Birds ဂိမ်း Go ကို Crazy
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Angry Birds ဂိမ်း Go ကို Crazy
ဖေါ်ပြချက်: Angry Birds ဂိမ်းသူတို့အားဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ဝက်၏ပင်ပန်းဖြစ်ကြပြီးဤအချိန်သူတို့အနိုင်ယူဖို့တပြင်လုံးကိုနည်းလမ်းသစ်တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ သူတို့၏ရှင်ဘုရင်နှင့်ပြန်ချေမှုန်းခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏နှောင့်အယှက်အပြုအမူအဆုံးသတ်ထားနိုင်ရန်အတွက်ဝက်ဂူတစ်ရှည်လျားအန္တရာယ်ရှိတဲ့ခရီးအတွက်အနီရောင်ငှက်ကိုကူညီပါ
ထိန်းချုပ်ရေး: Angry Birds are tired of those pesky pigs and this time they foundawhole new way to defeat them. Help the red bird inalong and dangerous journey to the pigs cave in order to put an end to their annoying behavior by defeating their king and recovering all the stolen golden eggs. Enjoy this Angry Birds platform game using your keyboard arrows to play.
ကစား: 427,386 tag ကို: အမျက်တော် ထွက်. ငှက်, အမျက်တော် ထွက်. ငှက် Rio, အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်ဂိမ်း, အန်းဂရီးဘားဒ်စ်, အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်အာကာသ, ငှက်များ
ဆီးနှင်း, စန်တာနှင့်အားလပ်ရက်ရာသီအတွက်ခက်ခဲလေ့ကျင့်ရေးသူ၏အပေါင်းအဘော်နှင့်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့သစ်တောအတွင်းနက်ရှိုင်းသော။ သူတို့ကထင်းရူးအောက်မှာကစားစရာအရုပ်တွေအများကြီးကိုဆက်ကပ်ချင်တယ်။ ကို cut သစ်ပင်များအကြားစန်တာ, elf, reindeer ပါ, Gingerbread Man သို့မဟုတ် snowman ခုန်ကူညီပါ။ စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ပါ
အွန်လိုင်း copters ng? SW
ပိုပြီးခက်ခဲသည်နှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးဂိမ်းအသစ်နှင့်အတူနေသောသစ်တစ်ခုစတိုင် Flappy Bird ကို။ ဒီဂိမ်းထဲမှာ, ပန်ကာနှင့်အတူပျံသန်းဖို့ကြိုးစားနေဇာတ်ကောင်များ၏ထိန်းချုပ်မှုအတားအဆီးလွန်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ပေးစွမ်းသည်။ သင့်ရဲ့ဘယ်ဖက်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဇာတ်ကောင်နဲ့ညာ st နှင့်အတူ mouse